Sirta ka Dameysa Guulaha Aasaasayaasha Shirkaadaha ugu Waaweyn Adduunka | Maankaab.com
Sirta ka Dameysa Guulaha Aasaasayaasha Shirkaadaha ugu Waaweyn Adduunka
8th February 2015 | Published by: Maankaab 1
Waxa turjumay: Cabdillaahi Beershiya
Bilawgii Sheekada Bill Gate
Safarkii Bill Gates iyo Microsoft ku noqdeen xiddiggaha
Markii ay ku mashquulsanayd shirkadda IBM iney barnaamij ay leedahay u hesho kombuyuutarka ay sameysay ayey codsi shirkadda Microsoft, iyaga oo ka dalbaday iney barnaamij u sameeyaan. Haseyeeshee, Gates awood umuu yeelan in uu diyaariyo barnaamij ku shaqeeya kombuyuutarka IBM.
Waxa barnaamij u samaysya shirkad lagu magacaabi jiray Seatlle INC oo sameysy barnaamij ay ugu magic dartey OSCPLM.
Shirkadda IBM may ogalaan iney heshiis la dhigato shirkadda Seatlle INC oo waxay mar labaad codsatey in shirkadda Microsoft u sameyso barnaamijkooda kombuyuutarka.
Haddaba, su’aashu waxay tahay side ayey Microsoft ugu suurto gashay inuu u sameeyo IBM barnaamijkooda?
Halkan waxaynu ka dheehan karnaa sirta ku jirta guulaha isdaba jooga ah ee Bill Gates ka gaadhey ididiilooyinkiisa.
Barnaamijkii Microsof ku dhaqaaqdey sameyntiisa oo ku qaatey muddo lix toddobaad ah sidii barnaamijkii hore, ayaa noqday mid sita magaca Operating Sytem Quik and Dirty ‘QDOS.’ Barnaamijkan ay wada yeesheen Microsoft iyo IBM waxay u beddeleen magaciisa Ms-Dos.
Muddo kadib waxa barnaamijkan la wareegtay shirkada IBM oo lacag u celisay Bill Gates.
Intii Bill Gates ku mashquulsanaa iibinta iyo isku dubaridka barnaamijkaas ayuu maalin uu shir ka qaybgelayey arkey isaga oo aan xidhneyn taiga qoorta lagu xidho, kadib wuxuu tegey suuqa si uu u soo iibsado waxaannu ka habsaamey shirkii, kadib waxa laga qorey hadal lagu daray waxyaabaha lagu qoslo Maraykanka dhexdiisa oo ah; “Waxa fiican inaan shirka ka habsaamo halkii aan tegi lahaa aniga oo bilaa tay ah.”
Intaa kadib, wuxuu ku fikirey inuu soo saaro barnaamij ka awood badan kii ay isticmaaleysay shirkada IBM waxaannu diyaariyey qorshe cusub oo lagu magacaabay Graphical User Interface (GUI) Based Window Operating System…
Markii ay xidhiidhka fiican wada yeesheen shirkadda IBM iyo shirkadda Microsoft, waxa lagu qiyaasay shaqaalaha shirkadda IBM kun qof, dakhligeegana 3.6 bilyan dollar oo ahaa dakhli sannadeedkeeda.
Dhinaca kale, shirkadda Microsoft waxay ku hoos noqotay shirkad aad u yar oo leh 32 shaqaale ah iyo macaash aad u yar sannadkii. Haseyeeshee, faraqa kaliya ee u dhaxeeyey waxa uu ahaa maskaxda Bill Gates oo aanay haysan shirkadda IBM.
Bill Gates, wuxuu guntiga dhiisa iskaga dhigay sidii uu shirkadiisa u horumarin lahaa ee uu ula tartami lahaa shirkadaha kale ee ka awooda badnaa, waxaannu ku dedaalay inuu shirkadiisa xayasiis badan u sameeyo, kaas oo lagu qiyaasay in 3.5 milyan dollar ay kaga baxeen xayasiis iyo tijaabooyin lacag la’aan ah.
Mr. Gates, wuxuu soo uruursaday 30 qof oo ka mid ah dadka ugu khabiirsan dhinaca barnaamijyada kombuyuutarka oo muddo laba sannadood ah uu la galay wada shaqayn xoogan oo xataa la shaqaynaayo saacado dheeraad ah si uu iskugu dayo sidii loo akhtiraaci lahaa barnaamijka Widows-ka.
Natiijadii uu ka gaadhay dedaaladaasi kamay farxin oo sidii la doonaayey umuu soo saarin. Haseyeeshee, waxa ka dhashay isku dayadaasi Mouse-ka kombuyuutarka oo noqday arrin muhiim ah.
Gates, wuxuu iska waayey dulqaad iyo dhaba adayg uu hawsha ku sii wado, isaga oo ku hanjabay in uu joojin doono shaqada isdaba jooga ah ee uu ku doonaayo in uu barnaamij ku soo saaro iyo guud ahaan ka shaqaynta shirkadda kombuyuutarka, maadaama uu ku guulaysan waayey soo saarista Widows-ka.
Shirkadda IBM iyo Microsoft waxay ahaayeen laba shirkadood oo wada shaqeeya oo iska kaashaday dardarangelinta barnaamijka MS-Dos oo ku shaqayntiisu ay aad ugu fiicnaatay shirkadda IBM.
Sidaas darteed, shirkadda IBM waxay doonaysay in ay horumariso nidaamkaas, si la mid ah sida uu doonaayey Bill Gates, waxaanay u bixisay barnaamijka lagu horumarinaayey Mis-Dos-ka Top View with GUI, kadib markii ay shirkadda Microsoft ay ku guulaysatay samaynta barnaamijka Windows I, wuxuu ahaa barnaamij aan u shaqayn sidii loo baahnaa oo daciifno farabadani ka muuqato, kaas oo markii dambe keenay in shirkadda weyn ee Apple ay ku dhaleecayso shirkadda Microsoft in ay xaday qayb ka mid ah qalabkii ay isticmalaayeen.
Laga bilaabo halkaas Bill Gates wuxu go’aansaday in uu dhagax laba shimbirood ku wada dilo, isaga oo isku dayey in uu ku guulaysto sidii uu u hanti lahaa labada shirkadood ee IBM iyo Apple.
Si uu arrintaa uga midho-dhaliyo Bill Gates wuxuu siiyey shirkadda Apple lacag badan. Si ay ugu oggolaato in u isticmaalo qalabka shirkadda Apple marka uu doonaayo in uu habayn fiican ku sameeyo barnaamijkiisii daciifka noqday ee Windows I.
Hal sanno ka dib, wuxuu soo saaray Windows II oo sidii hore ka fiican, bil kadibna waxa loo oggolaaday in si xor ah uu u isticmaalo qalabka shirkadda Apple, taas oo ka dhigtay in uu si fiican ugu wada guulaysto shirkadda IBM iyo Apple.
Sannadku markuu ahaa 1989-kii Microsoft waxay go’aan ku gaadhay in ay iskaga tagto shirkadda IBM ee ay gacansaarka wada lahaayeen.
Dhinaca kale, waxay noqotay shirkad suuqa xorta ah si fiican u soo wada gasha oo lagu xisaabtamo, Bill Gates iyo Poul Alen waxay noqdeen dad hantiilayaal ah, inkasta oo aanay nolosha Gates isbeddelin oo uu ku sii socday sidiisi hore.
Sannadku markuu ahaa 1986-kii shirkadda Microsoft waxay mar kale u guurtay meel cusub si ay u hesho macaamiil badan, iyada oo shaqaalaheedu waqtigaa dhammaa kun iyo laba boqol (1200).
Sannadku markuu ahaa 1988-kii Microsoft waxay iibsatay SQL Server from Sybase Incorporation, iyada oo xidhiidh la samaysatay shirkadda Ashton-tate oo asal ahaan ka soo jeeday Japan. Sidoo kale waxay iibsatay xuquuqda (Copy Right) luqada kombuyuutarka ee Java oo ay lahayd shirkadda Sun. Si aan loo helin shirkad kaga horreysa dhinaca barnaamijka kombuyuutarka.
Sannadka markuu ahaa 1999-kii, ayuu Bill Gates soo saaray buug uu u bixiyey “Shaqooyinka iyo degdeg u fikirka” kaas oo uu ku soo bandhigay sida loogu xaliyo mushkilada shaqada dhinaca kombuyuutarka.
Buugan waxa lagu turjumay 25 luuqadood, iyada oo dhinaca kale lagu baahiyey lixdan dal oo adduunka ku yaala.
Buuggani waxa uu ka mid noqday buuggaagta ugu qiimaha badan ee uu qiimeeyey wargeyska New York Times, USA To day, Word Streat Journal io shirkadda Amazoon.
Sidoo kale sannadku markuu ahaa 1995-kii ayuu qoray buug uu u bixiyey wadada guusha, kaas oo isagu laftiisu buuggaagta ugu fiican ee wargeyska New York Times qiimeeyo mudo toddobaad ah gudahood ayuu ka helay bugaas lacag aad u faro badan oo markii dambe uu ku caawiyey hay’adaha aan macaashka ahayn ee ka shaqeeya horumarka aqoonta iyo xirfadaha.
Bill Gates wuxuu aasaasay jimciyad (Urur) loo bixiyey Bill iyo Mandella Gates oo lacag malaayiiin dollar ah ku bixiyey sidii loola dagaalami lahaa aqoon-darrada, faqriga iio xannuunada.
Sannadkii 20074-kii ayey shirkadda Microsoft qayb ka iibsatay bogga Facebook iyada oo ku bixisay lacag qiime dhan 1.6%.
Taariikh ahaan Gates waxaynu ku soo ururin karnaa:
Magaciisa oo dhammeystiran : William Henry Gates (III).
Taariikhda dhalasho: 28/October/1995-kii.
Magaaada u ku dhashay: Seatlle, Washington.
Sifooyinka go’aan qaadasho io dhabar adayg: jecel go’aan qaadasho io dhabar adayg.
Waxay ka shaqayso: Kombuyuutarada.
Ugu dambeyntii shirkadda Microsoft, waxay soo martey dhibaatooyin badan oo mulkiluhu kaga soo baxay dhabar adayg iyo inuu ka warkeeno hamiga u xambaarsan yahay.
Waxyaabaha layaabka leh ee shirkaddani ku horumartay waxa lagu tilmaamaa iney ahayd shaqada joogtada ah ee Bill Gates iyo isaga oo ka faa’iideystay awoodo kale oo ay lahaayeen dadkii la shaqayn jirey.Shirkadaha gacanta fiican siiyey waxa lagu tilmaama iney ka mid ahayee Wal Mart, Apple iyo IBM.
Bill Gates, waxa lagaga dayan karaa adkeysiga shaqo ee u lahaa, ka midho dhalinta fikirkiisa iyo kaalmeysiga dadka shaqda kula jirey, qormadeena xigta haddii Alle yidhaa waxaynu ka sheekayn doonaa shirkadda Amazon.com and “You are Done”… la soco shirkadda Amazon……